Orange Money – Fivondronamben’ny Eveka: 200 tapitrisa Ar voaangona tao anatin’ny telo herinandro | NewsMada
Orange Money – Fivondronamben’ny Eveka: 200 tapitrisa Ar voaangona tao anatin’ny telo herinandro
Niara-niasa akaiky ny Orange sy ny Fivondronamben’ny eveka tamin’ny fanomanana ny famangian’ny Papa Fransoa. Niantso fanampiana amin’ny rehetra ny Fivondronamben’ny eveka, ny eto an-toerana, ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina, sy any ivelany, niara-nitan-tsoroka tamin’ny fandraisana ny Papa Fransoa. Manodidina 11 000 ireo nitondra ny anjara birikiny nandefa fanampiana tamin’ny alalan’ny Orange Money. 200 tapitrisa Ar mahery ny voaangona tao anatin’ny telo herinandro. Narotsaka avy hatrany tany amin’ny petrabolan’ny Fivondronamben’ny eveka izay tonga tao amin’ny Orange Money.
“Ny fahamaroan’ny asa notontosaina, toy ny fanamboarana fotodrafitrasa; ny sakafo isan’andron’ireo mpilatsaka an-tsitrapo, nisy 10 000; ireo mpanara-dia ny Papa tsy maintsy napetraka tany amin’ny hotely, sns. Tsy zakan’ny ankamaroan’ny kristianina izay efa sahirana ka sarotra ny mbola hanome fahasahiranana azy izany rehetra izany”, hoy ny mompera Rajoelison Germain, komity mpandrindra tamin’ny fanomanana ny fahatongavan’ny Papa.
“Ho an’ny Orange, tafiditra ao anatin’ny andraikitry ny orinasa eo amin’ny fiarahamonina izany, tsy misy sarany nalaina tamin’ny komity mpandrindra tamin’ny fandrotsahana izany vola izany”, hoy ny tale jeneraly, i Michel Degland. “Endriky ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fiangonana katolika, sady vanim-potoana manan-tantara hahatomombana ny fandraisana ny ray masina. Nanampy ihany koa ireo mpizaika marobe manerana ny Nosy”, hoy ihany ny tale jeneraly, i Michel Degland.
Nanamafy ny fisaorana ny rehetra tsy an-kanavaka, nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka, nataon’ny kardinaly Tsarahazana Désiré teny Ivato, tamin’ny fanaterana ny Papa, ny mompera mirahalahy, Rajoelison Germain sy Randrianantenaina Gabriel.